Turkiga – Awood Islaami ah oo laga heybeysto | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka December 7, 2016	0 304 Views
Muqdisho (Himilonews) – Dabcan hadday go’aansadaan, ciidanka qalabka sida ee Turkiga cusub, waxay duqeyn karaan Yurubta ku dhagan ilaa Paris. Midkood kamid ah kuwa diidan aragtida Islaamiga ah ee mr. Erdogan ma awoodo inuu iska caabiyo ama ugu babac-dhigo ciidan is-hortaaga. Tayada ciidan iyo qalabeysnaantooda labadaba, Turkigu waa haldoor awood looga baqo. Balse way kugu adag tahay inaad rumeysato? Aan bal fiirino xogaha laga hayo.
Hadaba, maxaa la gudboon Reer Galbeedka? – kow ugu horreyn waa inay isku dayaan inay Turkiga ka saaraan Gaashaan-buurta NATO iyaga oo sheeganaya dagaalkii qaboobaa iyo fikradiisiiba ay isla dhinteen iyo tan labaad oo ah inay is-garab taagaan jaarka ay coleytamaan ee Armenia oo ah dalkii ugu horreeyey ee yeesha aqlabiyad Masiixiyiin ah taariikhda lahayo.
Qore: Zakariya Hassan Hiraal.
Previous: Erdogan: af-ganbiga kahor iyo kadib – iyo Himiladiisa fog.
Next: Nairobi – Caasimad ka kooban laba magaalood oo quruxda geeska Afrika iyo qashinka Afrika kala matala.
Lakulan – Bisadda ugu xanaaqa badan internet-ka.
44 jir aan wejigiisu dhab u korin oo lagu qaldo cunug yar!